Inona ny fitaovana iOS mifanaraka amin'ny iOS 10? [Nohavaozina] | Avy amin'ny mac aho
Inona avy ireo fitaovana iOS mifanaraka amin'ny iOS 10? [Nohavaozina]
Raha ny momba ny Mac dia manana lisitra miaraka aminay milina mifanentana amin'ilay rafi-piasana macOS Sierra 10.12 vao havaozina ary vao haingana, ho an'ny fitaovana iOS dia hanatanteraka lisitra fitaovana kely ihany koa izahay izay hifanaraka amin'ny kinova vaovao sy fanavaozana ny rafitra fiasan'ny Apple iPhone, iPad ary iPod touch.
Ny marina dia misy antsipiriany foana izay mety hahatonga antsika hieritreritra fa tsy tokony hatao ny fanavaozana ary tsy mandeha amin'ny laoniny ny fitaovantsika raha manavao isika. Mazava ho azy fa mety mandeha tsara kokoa noho ny hafa ny fitaovana sasany noho ny olana momba ny fikirakirana anatiny, saingy tsy mino izahay fa tsy ny fanavaozana ny vahaolana no omen'ny orinasa azy manokana. Avy eo ny fanapahan-kevitry ny tsirairay raha te-hanavao izy ireo na tsia, fa ny torohevitra na ahoana na ahoana dia manavao.
Ireo no maodely izay hanaiky ny kinova vaovao amin'ny rafitra fiasa iOS 10. Toa lisitra somary malalaka sy mitombina ho antsika toa an'i Apple tokoa izany, mifanaraka amin'ny fanavaozana ny fitaovany.
Mivoaha amin'ny kinova vaovao an'ny iOS 10, ny iPhone 4s, iPad 2, iPad 3, iPad mini ary iPod misy taranaka 5, Ary toa tsy zavatra hafa tsy mahazatra antsika izany raha jerena ny fotoana nandehanan'izy ireo teny an-tsena, saingy marina fa miasa tsara tanteraka ireo fitaovana ireo ankehitriny. Apple dia hanohy manadio ireo kinova beta mandra-pahatongan'ny andro fandefasana ary mazava fa hanatsara ny antsipirian'ny beta navoakan'izy ireo ho an'ny mpamorona, fa ireo fitaovana tohanan'ny kosa dia hijanona ho izay ananantsika amin'ity sary etsy ambony ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iOS » Inona avy ireo fitaovana iOS mifanaraka amin'ny iOS 10? [Nohavaozina]
Louis Silva dia hoy izy:
Mazava ho azy fa tsy misy zavatra toy ny iPhone, ankoatry ny fomban'ny telefaona iray afaka miasa sy manavao hatrany raha toa ka marika hafa iray na herintaona na 2 no mijanona tsy manohana ny fitaovany.
Valiny tamin'i Luis Silva
Nahazo vaovao tao amin'ny WWDC 2016 ihany koa ny rafitra fiasan'ny tvOS
Ny fehezanteny roa adin'i Apple dia nihena ho 7 minitra tamin'ity horonan-tsary ity